Maamulka Biden oo isbedal ballaaran ku sameynaya xiriirka Sacuudiga | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maamulka Biden oo isbedal ballaaran ku sameynaya xiriirka Sacuudiga
Toddobaadkan maamulka madaxweyne Joe Biden waxa uu bixiyay tilmaan dheeri ah oo ku saabsan sida ay u qorsheyneyaan in ay isaga fogeeyaan siyaasadaha ku aaddan Bariga Dhexe ee madaxweynihii isaga ka horreeyay, Donald Trump.
Xoghayaha Saxaafadda ee Aqalka Cad, Jen Psaki, ayaa sheegtay in madaxweynaha uu damacsan yahay inuu “dib u qiimeeyo” xidhiidhka uu la leeyahay xulafada muhiimka ah ee Mareykanka, Sacuudi Carabiya.
Madaxweyne Trump, oo uu sii mariyey wiilka uu sodogga u yahay Jared Kushner, ayaa xidhiidh dhow oo shaqsi ah la yeeshay Dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman, isaga oo si weyn u siiyay madax-bannaani sida ay ugu adeegsadeen hubkii uu Mareykanku keenay Yemen.
Madaxweyne Biden, waxay umuuqataa inuu doorbidayo inuu la macaamilo aabihiis, Boqor Salmaan, oo 80-madiisa ku jira caafimaadkiisuna liito. Hadda wixii ka dambeeyana, bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, siyaasadda Mareykanka ayaa loo baahan yahay in mudnaanta la siiyo ku dhaqanka sharciga iyo ixtiraamka xuquuqda aadanaha.
Haddaba maxay taasi uga dhigan tahay labada dalba? Waa maxay se halista halkan ku sugan ee ay wejahayaan Washington iyo Riyadh?
Amiirka leh Dhaxal Sugaha Boqortooyada Sacuudiga, oo loo yaqaan MBS, waxay uga dhigan tahay waqtiyadii wanaagsanaa ee xilligii madaxweyne Trump ay gebi ahaanba dhammaadeen.
Si Sucuudigu u sii haysto Mareykanka inuu yahay saaxiibkiisa istiraatiijiga ah iyo “dalladda amniga” muddada dheer, waxa ay u badan tahay in wax la isku raaco, si loo waafajiyo qaab ka duwan fikirka Aqalka Cad.
Isbahaysiga Sacuudiga iyo Mareykanka wuxuu leeyahay xididdo qoto dheer. waxa uuna dib ugu noqonayaa kulan taariikhi ah oo ku dhex maray markab dagaal oo Mareykanku lahaa aasaasihii Sacuudi Carabiya, King Abdulaziz iyo Madaxweyne Roosevelt.
Isbahaysigan ayaa ka badbaaday kacdoonadii xayiraadda shidaalka ee 1973, Dagaalkii Gacanka ee 1991 iyo weeraradii 9/11 ee 2001, halkaas oo afduubayaashii ismiidaaminta ahaa ee al-Qaacida u badnaa ay u dhasheen Sacuudiga. Sacuudiga ayaa laga yaabaa inuu si aad ah uga xumaado kooxda cusub ee Aqalka Cad – waxay ku qaadatay hoggaanka dhowr maalmood inay u hambalyeeyaan Joe Biden – laakiin suuragal ma aha si yar oo fudud u kala furtaan.
Waxay ogyihiin in haddii xoogaga shanaad ee Mareykanka ay marwalba ka baxaan gacanka, Sacuudi Carabiya oo ay xifaaltamaan Iran ayaa si dhakhso leh u buuxin doonta booska oo noqon doonta awooda ugu weyn ee gobolka.
Waqtigaan la joogo, maamulka Biden wuxuu wacad ku maray inuu Sacuudi Carabiya ay ka caawin doonaan in ay iska difaacaan weerarrada, ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drones-ka ah ee ay bilaabayaan xoogaga Xuutiyiinta Yemen.
Mareykanka, waxaa jira qatar ku wajahan habka Biden. Boqor Salmaan hadda aad ayuu u jilicsan yahay inuu door firfircoon oo gacan-qaadasho leh ku yeesho hawl maalmeedka Sacuudi Carabiya. Marka ficil ahaan, Washington waxay si fiican wax ugu suurageli lahaayeen haddii ay macaamilayayaan wiilkiisa, MBS, dhowr iyo toban sano oo dheeraad ah.
Inta badan dowladaha reer Galbeedka, MBS wali waxaa loo arkaa mid sun ah, oo wasakhaysan maadaama uu la jiro tuhun ballaaran oo laga qabo inuu amray dilkii weriye Jamal Khashoggi ee 2018, oo uu beeniyay. Laakiin gudaha Sacuudi Carabiya MBS badanaa waa caan, gaar ahaan dhalinyarada, oo soo dhaweynaya dib-u-habeyntiisa bulshada.
Laakiin markay tahay cadaadiska Mareykanka inuu saameyn ku yeesho arrimaha Sacuudi Carabiya waxyaabo badan had iyo jeer ma noqdaann sidii ay Washington doonaysay. Markii ay ahayd Xoghayaha Arimaha Dibada Mareykanka 2005, Condoleeza Rice waxay cambaareysay madaxbanaanida gobolka waxayna ku boorrisay Sacuudiga inay qaataan dimuqraadiyada ayna qabtaan doorashooyin xor ah
Previous articleTirada dadka COVID-19 ugu dhintay Afrika oo 100 kun dhaaftay
Next article Madoobe iyo Deni oo dalbaday in shirka maamulada lagu qabto xarunta Xalane. Hadii muqdisho imaadaan
Xubnaha beesha caalamka ayaa laga soo xigtay in ay ka daaleen u kala dabqaadida hogaamiyayaasha Soomaalida, iyaga oo taagan halkii ugu danbaysay oo ay...
Dagaalo Xoogan oo maalintii Afaraad ka socda inta u dhaxeysa...